Fitifirana ny G2 Rado : TRANGA FAHEFATRA TANATIN’NY IRAY VOLANA! -
AccueilRaharaham-pirenenaFitifirana ny G2 Rado : TRANGA FAHEFATRA TANATIN’NY IRAY VOLANA!
Ity fahafatesan’ny G2 Rado ity no tranga fahefatra nanimba endrika ny fitondrana tato anatin’ny iray volana (nanomboka ny faha-2 Desambra 2016 hatramin’ny 7 Janoary 2017). Tamin’ny fotoana namaranana ny dinika niarahana tamin’ireo mpamatsy vola ka nahazoantsika vola mitentina 10 miliara no indro nisy nisava ny trano fonenan’ny kolonely Lylyson. Nanomboka fantatry ny vahoaka ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana fanampiana ireo vahoaka tratran’ny kere any Atsimo no nisamborana an’i Augustin Andriamananoro. Fotoana fohy taorian’izany, nandritra ny fanomanan’ny vahoaka ny krismasy sy ny taom-baovao, nandeha indray koa ilay feo ny amin’izany fanonganam-panjakana nokotrehina manamboninahitra. Tsy ampy 48 ora akory taorian’ny fifampiarahabana tratry ny taona teny Iavoloha dia indro indray koa ny fitifirana ny G2 Rado. Tahaka ny hoe tsy maintsy misy trangan-javatra hanimbana endrika ny fitondrana hatrany ary tena mampametra-panontaniana mihitsy.
“Nasain’ireo zandary nametraka ny basim-borona teny aminy i sefo Rado. Mbola tsy tafapetraka tamin’ny tany akory anefa ilay basy dia nofitirin’ireo zandary izy”, hoy ny vavolombelona. “Fiarovan-tena no nataon’ireo zandary tany an-toerana, nitifitra avy hatrany mantsy ireo andian’olona”, hoy ny avy ao amin’ny zandarimaria Ankadilalana.
Mifanohitra tanteraka ny fanambarana nataon’ny zandarimaria avy etsy Ankadilalana sy ny an’ny vavolombelona manodidina ny zava-nitranga nahafaty ny G2 Rado. Tsy nisy fifampitifirana raha ny voalazan’ny vavolombelona, ireo zandary tany an-toerana no avy hatrany dia nitifitra ny G2 Rado. Nisy fifamaliana tifitra kosa raha ny nambara nandritra ilay valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny zandarimaria Ankadilalana ny alahady lasa teo.
“Andiana “gros bras” ndeha hanafika vadintany sy mpitandro filaminana ireto andian’olona nifampitifitra tamin’ny zandary tany Ambatomanohina ireto”, hoy ny nambaran’ny zandarimaria avy etsy Ankadilalana. “Nitondra vadintany ndeha hanatanteraka didim-pitsarana no anton-diany tany, didim-pitsarana mampiato ny fandrohana ireo mpiara-miasa aminay”, hoy ny vavolombelona.
Mbola mifanohitra indray koa eto ny voalazan’ny roa tonta. Andian’olona nikasa hanafika no nisokajian’ny zandarimaria Ankadilalana ireto olona ireto, mpitrandraka ao amin’ilay toerana nitondra vadintany kosa no fijoroana vavolombelona nataon’izy ireo ary tsy nikasa hiditra tao amin’ilay toeram-pitrandrahana fa saika hamonjy ny naman’izy ireo izay nafindra toerana.
“Vokatry ny fahaverezan-drà be loatra sy ny halaviran’ny toerana no nahafaty ilay olona voatifitra izay fantatra ihany amin’izao fotoana fa mpitandro filaminana”, hoy indray ny zandarimaria etsy Ankadilalana. “tsy maty avy hatrany i Rado saingy tsy navelan’ireo zandary nokarakaraina mihitsy izy. Ompa sy vono ary fandrahonana no nahazo anay, nasain’ireo zandary niboridana ary noterena hanao sonia procès verbal”, araka ny tenin’ny vavolombelona.
Mifanohitra hatrany ny voalazan’ny zandarimaria Ankadilalana sy ny vavolombelona manodidina ny zava-nitranga nahafaty sy nahavoatifitra ny G2 Rado. Ny zavatra tsy azo lavina dia samy zandary avy ao Ankadilalana izy ireo, izany hoe, ny G2 Rado izay maty voatifitra sy ireo izay nitifitra azy. Mifankahalala sy mifankahafantatra mazava ho azy ireto zandary efa tany an-toerana sy ny G2 Rado koa nahoana no tonga tamin’izao famoizana aina izao? Andian’olona nitondra “gros bras” nikasa hanafika ny zandary sy ny vadintany efa tany an-toerana tokoa ve ireto niara-dia tamin’ny G2 Rado ireto?
Tokony hisy komity manokana hisahana ny fanadihadiana ity raharaha ity noho izao fifanoherana misy eo amin’ny zandarimaria Ankadilalana sy ny vavolombelona izao. Heverin’ny mpandinika fa tsy tsara loatra raha ny sampan-draharaha mpanao fanadihadiana mahazatra no handray an-tanana ity tranga iray ity fa tokony ho komity mpanao fanadihadiana manokana mihitsy mba hivoahan’ny tena marina.